Ny firafitry ny fiangonana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny rafitry ny fitantanana ny fiangonana
I Jesoa Kristy no lohan’ny fiangonana. Manambara ny sitrapon’ny Ray amin’ny Fiangonana amin’ny alalan’ny Fanahy Masina Izy. Amin’ny alalan’ny soratra masina, ny Fanahy Masina dia mampianatra sy manome hery ny fiangonana mba hanompoana ny filan’ny fiaraha-monina. Ny Fiangonan’Andriamanitra Maneran-tany dia miezaka manaraka ny fitarihan’ny Fanahy Masina eo amin’ny fiahiana ny fiangonany ary koa amin’ny fanendrena loholona, ​​diakona sy diakona ary mpitarika. (Kolosianina 1,18; Efesianina 1,15-23; Jaona 16,13-15; Efesianina 4,11-16)
Ny fitarihana ao amin'ny fiangonana
Koa satria marina ny tsirairay fa ny kristiana tsirairay dia manana ny Fanahy Masina ary ny Fanahy Masina mampianatra antsika tsirairay, moa ve mila misy tari-dalana ao amin'ny Fiangonana? Tsy tokony ho kristiana bebe kokoa ve ny mahita ny tenantsika ho vondrona mitovitovy, izay mahavita ny andraikitra rehetra ny olon-drehetra?
Andininy Baiboly isan-karazany, toy ny 1. Johannes 2,27, toa manamafy an'io hevitra io - fa raha raisina ivelan'ny teny manodidina. Ohatra, rehefa nanoratra i Jaona fa tsy mila olona hampianatra azy ny Kristianina, moa ve izy nilaza fa tsy tokony hampianarina azy ireo? Dia hoy izy hoe aza miraharaha izay soratako fa tsy mila ahy na olon-kafa ho mpampianatra ianao? Mazava ho azy fa tsy izany no tiany holazaina.
Jaona no nanoratra an'io taratasy io satria ireo olona ireo dia mila ampianarina. Nampitandrina ny mpamaky azy momba ny Gnosticism izy, ny amin'ny finoana fa azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampianarana miafina ny famonjena. Nambarany fa ny fahamarinana momba ny kristianisma dia efa nantsoina tany am-piangonana. Ny mpino dia tsy mila fahalalana miafina afa-tsy izay efa nentin'ny Fanahy Masina ho an'ny fiangonana. Tsy nilaza i Jaona fa afaka manao izany ny kristiana raha tsy misy mpitondra sy mpampianatra.
Ny kristiana tsirairay dia manana ny andraikiny manokana. Tsy maintsy mino ny rehetra, handray fanapahan-kevitra momba ny fomba hiainana, manapa-kevitra hino. Fa ny Testamenta Vaovao kosa dia manambara mazava fa tsy olona ihany isika. Mpikambana ao anaty fiarahamonina isika. Ny fiangonana dia afaka misafidy raha toa ka tsy maintsy atao ny andraikitra. Avelan'Andriamanitra hisafidy izay ataontsika isika. Saingy tsy midika izany fa ny safidy rehetra dia mitovy ho antsika na ny tsirairay dia mitovy amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
Mila Mpampianatra ve ny Kristianina? Ny Testamenta Vaovao rehetra dia mampiseho fa mila azy ireo isika. Ny Fiangonan'i Antiokia dia nanana mpampianatra ho iray amin'ireo toeran'ny mpitarika azy3,1).
Ny mpampianatra dia iray amin’ireo fanomezana omen’ny Fanahy Masina ny Fiangonana (1. Korintiana 12,28; Efesianina 4,11). Paoly dia niantso ny tenany ho mpampianatra (1. Timoty 2,7; TITOSY 1,11). Na dia taorian’ny taona maro ninoana aza, dia mila mpampianatra ny mpino (Hebreo 5,12). Nampitandrina ny amin’ny finoana fa mpampianatra ny olona rehetra i Jakoba (Jakoba 3,1). Hita amin’ny fanamarihany fa mazàna no nisy olona nampianatra ny Fiangonana.
Mila fampianarana tsara momba ny fahamarinana momba ny finoana ny Kristianina. Fantatr'Andriamanitra fa mitombo amin'ny hafainganam-pandeha samihafa isika ary manana ny herintsika amin'ny sehatra samihafa. Fantany satria izy no nanome antsika ireo hery ireo. Tsy mitovy ny fanomezana omeny ny olona rehetra (1. Korintiana 12). Ary mihoatra lavitra noho izany aza, dia mizara izany isika, mba hiara-hiasa hahasoa antsika, ka hifanampy, fa tsy hitokana ho an'ny tenantsika (1. Korintiana 12,7).
Ny kristiana sasany dia mahavita maneho famindram-po, ny sasany manavaka ara-panahy, ny sasany amin'ny fanompoana ara-batana, ny sasany ho fampitandremana, fandrindrana, na fampianarana. Ny kristiana rehetra dia mitovy ny lanjany, fa ny fitoviana dia tsy midika hoe mitovy. Samy nomena ny fahaiza-miaina samy hafa isika, ary na dia samy manan-danja aza izy rehetra ireo dia tsy mitovy daholo ny olona. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika, amin'ny mpandova famonjena antsika dia mitovy isika. Na izany aza, tsy mitovy ny andraikitsika rehetra ao am-piangonana. Mampiasa ny olona Andriamanitra ary mizara ireo fanomezam-pahasoavany araka izay niriny, fa tsy araka ny fanantenan'ny olombelona.
Noho izany dia mampiasa mpampianatra ao amin'ny Fiangonana Andriamanitra, olona afaka manampy ny hafa hianatra. Eny, miaiky aho fa, amin'ny maha-fikambanana eto an-tany antsika, dia tsy mifantina hatrany ny talenta indrindra, ary ekeko koa fa ny mpampianatra indraindray dia manao fahadisoana. Saingy tsy manafoana ny fijoroana ho vavolombelona mazava ao amin'ny Testamenta Vaovao ny hoe manana ny mpampianatra tokoa ny Fiangonan'Andriamanitra, izany dia andraikitra tokony azontsika antenaina amin'ny vondron'olona mpino.
Na dia tsy manana ny fanompoantsika manokana antsoina hoe “mpampianatra” aza isika, dia manantena ny hisian’ny mpampianatra ao amin’ny fiangonana;1. Timoty 3,2; 2 Tim 2,2). Ao amin’ny Efesianina 4,11 Nofintinin’i Paoly tao anatin’ny vondrona iray ny mpitandrina sy ny mpampianatra tamin’ny fiantsoana azy ireo araka ny fitsipi-pitenenana toy ny hoe manana andraikitra roa sosona io andraikitra io: mamahana sy mampianatra.
Ny Testamenta Vaovao dia tsy milaza ambaratongam-pitantanana manokana ho an'ny fiangonana. Nanana apostoly sy loholona ny Fiangonana Jerosalema. Nanana mpaminany sy mpampianatra ny Fiangonana tany Antiokia (Asa 15,1; 13,1). Ny andalan-teny sasany ao amin’ny Testamenta Vaovao dia antsoin’ny mpitarika hoe loholona, ​​ny hafa miantso azy ireo ho mpitandrina na eveka, ny sasany miantso azy ireo diakona.4,23; TITOSY 1,6- faha-7; Filipianina 1,1; 1. Timoty 3,2; Hebreo 13,17). Toa samy hafa ireo teny ireo ho an'ny asa iray ihany.
Ny Testamenta Vaovao dia tsy mamaritra ny ambaratongan'ny apôstôly, mpaminany, evanjelistra, pasitera, loholona, ​​diakona ary mambra laika amin'ny antsipiriany. Na izany aza, ny teny hoe "momba" dia tsy ho tsara indrindra, satria ireo dia asa fanompoana natao hanompoana ny Fiangonana. Na izany aza, ny Testamenta Vaovao dia mamporisika ny olona hankatò ny mpitarika ny Fiangonana, hiara-miasa amin’ny fitarihany3,17). Tsy mety ny fankatoavana an-jambany, ary tsy mety koa ny fisalasalana na fanoherana tafahoatra.
Nolazain'i Paoly fa hierarchy tsotra izy rehefa nilaza tamin'i Timoty mba hanendry loholona ao amin'ireo fiangonana. Amin’ny maha apostoly azy, mpanorina ny fiangonana sy mpitaiza azy, i Paul dia nomena toerana ambonin’i Timoty, ary ny anjarany, i Timoty dia nanana fahefana hanapa-kevitra hoe iza no tokony ho loholona na diakona. Saingy famaritana an'i Efesosy io, tsy fepetra takian'ny fikambanan'ny fiangonana ho avy. Tsy misy ezaka ataontsika hamatorana ny fiangonana rehetra amin'i Jerosalema na ho any Antiokia na Roma. Mety tsy hitombina izany tamin'ny taonjato voalohany.
Ka inona no azo lazaina momba ny fiangonana ankehitriny? Azontsika atao ny milaza fa manantena ny hananan'ireo mpitarika Andriamanitra ny mpitarika, saingy tsy nofaritan'izy ireo hoe inona no tokony hiantsoana ireo mpitarika ireo na ny fomba tokony hahatratrarana. Navelany nosokafana ireo antsipiriany ireo mba hahafahan'izy ireo mamaha ny toe-javatra iainan'ny Fiangonana. Isika dia tokony hanana mpitondra ao amin'ny fiangonana eo an-toerana. Saingy tsy maninona izay antsoina hoe: Pasitera Pierce, Loholona Ed, Pastor Matson, na mpiasam-piangonana Sam no mety ekena.
Ao amin'ny Church of Worldwide Church of God, noho ny toe-javatra iainantsika dia mampiasa izay azo antsoina hoe maodely fitantananana "episkopaly" isika (ny teny hoe episkopaly dia avy amin'ny teny grika hoe episkopos mpiandraikitra, izay adika indraindray amin'ny eveka). Mino izahay fa izany no fomba tsara indrindra hananan'ny fiangonantsika fampianarana sy fitoniana mahasalama. Ny maodelin'ny fitarihantsika episkopaly dia manana ny olany toy ny maodely hafa, satria ny olona ianteheran'izy rehetra dia mety ho diso. Mino izahay fa, raha jerena ny toe-javatra misy antsika ara-tantara sy ara-jeografia, ny fomba fandaminantsika dia afaka manompo ny mambra tsaratsara kokoa noho ny maodely fitarihana Kongregasionaly na Presbyteriana.
(Aza hadino fa ny maodely fitarihan'ny fiangonana rehetra, na kongresy izy ireo, Presbyterian na episkopal, dia afaka maka endrika samihafa. Ny endrintsika modely episcopal dia tsy mitovy amin'ny an'ny Eglizy Ortodoksa Atsinanana, ny Anglikanina, ny Episkopaly, ny Romanina Katolika na Fiangonana Loterana).
I Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana ary ny mpitarika rehetra ao amin'ny fiangonana dia tokony hiezaka hitady ny sitrapony amin'ny zava-drehetra, amin'ny fiainany manokana ary amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny mpitarika dia tokony hihetsika tahaka an'i Kristy amin'ny asany, izany hoe, tsy maintsy miezaka ny manampy ny hafa izy ireo, fa tsy hahasoa ny tenany. Ny fiangonana eo an-toerana dia tsy vondron'olona manampy ny pasitera amin'ny fanatanterahana ny asa. Fa kosa, ny pasitera dia miasa toy ny mpanohana izay manampy ireo mpikambana amin'ny asany - ny asan'ny evanjely, ny asa tokony hataony araka ny filazan'i Jesosy.
Lehiben'ny loholona sy ara-panahy
Nampitahain’i Paoly tamin’ny vatana iray misy rantsambatana maro samihafa ny fiangonana. Tsy mitovy ny firaisany, fa ny fiaraha-miasa ho an’Andriamanitra iray sy ho an’ny tanjona iraisana. Samy manana ny tanjany ny mpikambana samihafa ary tokony hampiasaintsika ho tombontsoan'ny rehetra izany (1. Korintiana 12,7).
Ny fiangonan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao dia manendry loholona lahy sy vavy ho mpitondra fiangonana. Izy koa dia manendry mpitarika lahy sy vavy (izay azo antsoina koa hoe diakona) amin'ny alàlan'ny mpisolo toerana.
Inona no mahasamihafa ny "fanendrena" sy ny "fanomezan-dàlana"? Ny ordi amin'ny ankapobeny dia be mpahalala sy maharitra. Azo omena mitokana na ampahibemaso ny fanomezan-dàlana ary azo esorina mora foana. Ny fahazoan-dàlana dia tsy ofisialy ary tsy havaozina na havaozina ho azy ireo. Azo averina koa ny fahazoana laoniny, saingy tranga tsy ampoizina ihany izany.
Ao amin'ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany dia tsy manana famaritana manara-penitra sy feno momba ny andraikitry ny fiangonana rehetra isika. Matetika ny loholona dia miasa amin'ny maha-mpitandrina ao am-piangonana (mpitandrina voalohany na mpanampy). Ny ankamaroany dia mitory sy mampianatra, fa tsy izy rehetra. Ny sasany manokana amin'ny fitantanana. Ny tsirairay dia miasa eo ambany fanaraha-mason'ny mpitandrina lehibe miandraikitra (ny mpiandraikitra na episkopos an'ny fiangonana) arakaraka ny fahaizany.
Ny mpitarika ny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana dia ahitana taratra fahasamihafana bebe kokoa, ny tsirairay (antenainay) manompo araka ny fahaizany manompo ny filan'ny fiangonana. Ny pastera tompon'andraikitra dia afaka manome hery an'ireo mpitarika ireo amin'ny asa tsy maharitra na mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Ny mpitandrina dia mihetsika toa ny mpitondra ny orkestra. Tsy azonao atao ny manery ny olona hilalao amin'ny baton, fa afaka mitarika ho mpitari-dalana sy mpandrindra izy ireo. Ny vondrona amin'ny ankapobeny dia hanao asa tsara kokoa raha mampiasa ny famantarana omena azy ireo mpilalao. Ao anatin'ny anaram-piangonana antsika dia tsy afaka mandoro ny pasitera ny mpikambana. Ireo mpitandrina dia voafidy sy esorina amin'ny ambaratonga isam-paritra, izay ahitana ny fitantanan'ny fiangonana any Etazonia, amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo loholona ao an-toerana.
Ahoana raha mihevitra ny mpikambana iray fa tsy mahay ny pastera na mamily ny ondriny? Eto no ilana ny firafitry ny fitantanana episkopaly antsika. Ny olana ara-potopampianarana na ny mpitarika dia tokony horesahina amin'ny pasitera aloha, avy eo miaraka amin'ny mpitondra pastora (ny mpiandraikitra na episkopus an'ny pasitera ao amin'ny distrika).
Tahaka ny ilan'ny fiangonana mpitarika sy mpampianatra any an-toerana dia mila mpitarika sy mpampianatra ny mpitandrina. Izany no antony inoantsika fa ny foiben'ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanompoana ny fiangonantsika. Miezaka izahay ny ho loharano amin'ny fampiofanana, hevitra, fampaherezana, fiambenana ary fandrindrana. Mazava ho azy fa tsy tonga lafatra isika, saingy izany no fahitantsika ny fiantsoana nomena anay. Izany indrindra no tanjonay.
Ny masontsika dia tsy maintsy mijery an'i Jesosy. Manana asa ho antsika izy ary maro ny asa efa vita. Aoka isika hidera azy noho ny faharetany, noho ny fanomezam-pahasoavany ary ho an'ny asa mandray anjara amin'ny fitomboantsika.